Nasaina hisoroka ny hotely Kabul ireo teratany anglisy sy amerikanina
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Afghanistan » Nasaina hisoroka ny hotely Kabul ireo teratany anglisy sy amerikanina
Vaovao Mafana Afghanistan • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Crime • Vaovaom-panjakana • Hotels & Resorts • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao farany momba ny UK • Etazonia Vaovao Vaovao
Hatramin'ny nahalasan'ny Taliban dia vahiny maro no nandao an'i Afghanistan, fa misy mpanao gazety sy mpiasa fanampiana mijanona eto an-drenivohitra.
Ny Taliban dia mangataka fankatoavana iraisam-pirenena sy fanampiana mba hisorohana loza voajanahary amin'ny maha-olona.
Ny Taliban dia sahirana mamehy ny fandrahonana avy amin'ny toko ISIL ao Afghanistan.
Olona am-polony no maty tao amin'ny moske iray tamin'ny fanafihana nataon'ny fanjakana islamika tany amin'ny faritany Khorasan, ISKP (ISIS-K).
Ny departemantam-panjakana amerikana dia nampitandrina ny olom-pirenena amerikana rehetra ao Afghanistan mba hanalavitra ireo hotely ao Kabul, renivohitry ny firenena. Ny Biraon'ny raharaham-bahiny britanika, ny Commonwealth ary ny fampandrosoana dia namoaka izany fampitandremana izany amin'ny olom-pirenena anglisy rehetra eto amin'ny firenena.
“Ny olom-pirenena amerikana izay any na akaikin'ny Serena Hotel tokony hiala eo noho eo ”, hoy ny Departemantam-panjakana amerikana, tamin'ny fitanisana ireo“ fandrahonana fiarovana ”ao amin'ilay faritra.
“Manoloana ny fitomboan'ny risika dia omena torohevitra ianao mba tsy hijanona amin'ny trano fandraisam-bahiny, indrindra ao Kabul,” hoy ny birao misahana ny raharaham-bahiny, ny Commonwealth ary ny fampandrosoana any Britain.
Ny fampitandremana dia tonga andro vitsivitsy monja taorian'ny namonoana olona am-polony tao amin'ny moske iray tamin'ny fanafihana nataon'ny fanjakana islamika tany amin'ny faritany Khorasan, ISKP (ISIS-K).
Koa satria ny Taliban fitrandrahana, vahiny maro no nandao an'i Afghanistan, fa misy mpanao gazety sy mpiasa fanampiana mijanona eto an-drenivohitra.
Ilay fanta-daza Serena Hotel, hotely manankarena malaza amin'ny mpandeha raharaham-barotra sy ny vahiny vahiny, dia lasibatry ny fampihorohoroana indroa.
Ny Taliban, izay naka ny fahefana tany Afghanistan tamin'ny volana aogositra, dia mangataka fankatoavana iraisam-pirenena sy fanampiana mba hialana amin'ny loza maha-olona ary hanamorana ny krizy ara-toekarena ao amin'ny firenena.
Saingy, satria ny vondrona mpampihorohoro mifindra avy amin'ny vondrona mitam-piadiana mankamin'ny fahefana mpitondra, dia miady mafy ny hamono ny fandrahonana avy ao amin'ny toko ao amin'ny ISIL ao Afghanistan.
Mandritra ny faran'ny herinandro, zoky Taliban ary ny delegasiona amerikana dia nanao ny dinika nifanatrehana voalohany tao an-drenivohitra Qatar an'i Doha hatramin'ny nisintoman'ny US.
Ny fifanakalozan-kevitra dia “nifantoka tamin'ny ahiahy momba ny filaminana sy ny fampihorohoroana ary ny lalana azo antoka ho an'ireo teratany amerikana, teratany vahiny hafa ary ireo mpiara-miasa aminay Afghanistan,” hoy ny mpitondra tenin'ny Departemantam-panjakana Ned Price.
Raha ny filazan'ny Departemantam-panjakana dia "mahitsy sy matihanina" ny dinika ary naverin'ny manampahefana amerikana fa "ny Taliban dia hotsaraina amin'ny asany fa tsy ny teny fotsiny".
Nilaza ny Taliban fa nanaiky ny handefa fanampiana any Afghanistan i Etazonia, na dia nilaza aza i Etazonia fa vao noresahina izany ary misy fanampiana ho an'ny vahoaka Afghana fa tsy ny governemanta Taliban.